Shiinaha Grooved xamili laba-sawir sariirta armaajo alwaax adag golaha wasiirada # 0121 Soosaarka iyo Warshad | Yamazonhome
Grooved xamili laba-sawir-sariirta dhinaceeda alwaax adag alwaax adag golaha wasiirada # 0121
Magaca: Taallo habeenkii
Lambarka nambarka: Amac-0121
Cabir: 450mm * 400 * 470mm
Boqolaal sano alwaax TV caadadiisu tahay alwaax
Geedkii cadaa ee laga keenay Waqooyiga Ameerika ayaa la xushay. Alaabta guriga laga sameeyay ayaa u adkeysata saameynta, isqabqabsiga, suuska, fududahay in la qalajiyo, qaab yar, qaab dhismeedkiisa, iyo fududaantiisa in la dhejiyo. Xaddiga yaraanshaha waa mid aad u yar, si loogu adeegsan karo jawiga cimilada oo la beddeli karo iyadoo aan la dillaacin iyo dhibaatooyinka kale. Waa alaab guri oo wanaagsan.
Naqshadeynta shaashadda wareega
Geesaha golaha wasiiradu waa wareegsan yihiin oo siman yihiin, waxayna daryeelaan nabadgelyada adiga iyo qoyskaaga xeeladaha hoose. Saliida wax lagu karsado ee dabiiciga ah waa mid gacmaha lagu masaxo oo la mariyo, taas oo caafimaad iyo bey'ad ku habboon, oo aan lahayn ur gaar ah. Midabku waa mid tarjuma oo buurbuuran, taabasho jilicsan, oo aan saameyn ku yeelanaynin quruxda miraha dhirta dabiiciga ah ee qoryaha. Waxaa loo yaqaan "isku darka dahabka" ee alwaax adag.
Miiska sariirta laba jibaaran oo sariirta saran lehna gacmo jeexjeexan
Naqshadeynta waxaa loo qaybiyaa laba khaanadood mana jiraan qol lagu keydiyo. Waxay ku habboon tahay asxaabta jecel inay wax ku shubtaan golaha wasiirada si ay u ilaaliyaan muuqaalka miiska dushiisa. Samee meel gaar kuu ah oo lagu keydiyo. Marka la barbardhigo xakamaynta soo baxday, xakamaynta jeexjeexan waxay si wax ku ool ah uga hortagi kartaa xoqidda oo ay si fudud u soo jiidan kartaa. Kaliya ma dammaanad qaadayso muuqaalka fudud iyo moodada, laakiin sidoo kale ma hanjabayo amnigaaga.
Dovetail Tenon Fusion Wood Slid Adag
Nidaamka qashin-qubka khaanadda iyo geedi socodka tenon oo lagu daray tareenka isteerinka looxa ee adag, habka dhaqanka ee Luban, muddada dheer ee la isticmaalayo, sii adkeynaysa oo ka jilicsan. Kordhi qaab-dhismeedka khaanadda tooska ugu xiran ee qoolleyda ah, si khaanadda ay u yeelato awood xamuul xambaar xoog leh oo aysan jirin wax khatar ah oo dildilaac ah. Miiska sariirta dhinaceeda si fiican ayaa loo safeeyey hareeraheeda oo dhan, iyada oo aan lahayn jajabyo, wuxuuna leeyahay qaab jilicsan oo jilicsan. Uma baahnid inaad ka walwasho xoqitaanka marka aad dharkaaga gasho.
Hal lugaha adag ee alwaax adag ayaa ka xasilloon
Lugaha adag ee adag, naqshad dabaq ah oo toosan, naqshad culeys cilmiyaysan iyo xiriir xasilan oo la leh desktop-ka, 18cm oo ka saraysa dhulka ayaa leh meel nadiif ah. Dareenka jilicsan ee hoose ee lugta ayaa ah mid aan simbiriirixanayn oo u adkaysta xirashada, iyo naqshadeynta bini-aadamnimadu kama ilaalin karto oo keliya dabaqa xoqida, laakiin sidoo kale luminta khilaafaadka lugaha alwaaxa. Naqshadeynta hal lug oo alwaax ah ayaa culeyska xamuulku ka dhigayaa mid deggan.
Hore: Shiinaha Factory 8M 10M Midabee Habee Hawada Trick Barkadda Ballaaran Yoga Mat 0395
Xiga: Qaanad fudud oo hal qol jiif ah oo ku dhejisa qolalka habeenkii # 0122
Fudud hal qol jiif hal habeen oo dhinac taagan ...
Teendhada Yar ee fudud iyo Dhexdhexaadka ah Button Teendhada 0269
Miiska cuntada fudud ee marmar qafiifka ah ...
Gudiga xoqida ee loo yaqaan 'Sisal Cat Scratch Board' 0237
Dabaq Ey-Fasalka High Wood Wood jir Frame Butros ...